Kiisaska COVID-19 oo sare u kacay | KEYDMEDIA ONLINE
Wasaaradda Caafimaadka ayaa soo saartay tirade kiisaska cusub ee COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Tan iyo markii la xaqiijiyay inuu dib u soo laba kacleeyay cudurka saf marka ah ee COVID-19, waxaa si joogto ah u siyaadayay dadka uu soo ritay xunuunkaan.
Wasaaradda Caafimaadka ayaana si maalin-le ah uu soo saaarta kiisaska cusub. Tirada 24 saac ee ugu dambaysay laga baaray COVID-19 guud ahaan wadanka ayay Wasaaraddu ku sheegaty 1,323 ruux, waxaana laga helay 209 qof.
Gobolka Banaadir ayaa ah halka ugu badan ee cudurkaan uu dad ku soo ritay, waxaana caasimadda laga helay 181 ruux, halka Gobollada Waqooyi ee Soomaaliya laga helay 28 qof.
Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadka cudurkaan laga helo ay raggu u badan yihiin waxaana dadkii laga helay 24-kii saac ee la soo dhaafay Lab ahaa 140, halka ay dhadig yihiin 69 soo hartay.
Caana-maalikii la soo dhaafay 11 ruux ayaa u geeriyooday cudurka, waxaana ka bogsaday 21 qof, tirada guud ee laga helay tan iyo markii COVID-19 uu dalka ka dillaacay waa 7,727 ruux, waxaana ka bogsaday guud ahaan 3,867 qof, halka ay 260 shaqsi u geeriyoodeen.